Ny fomba hampivelatra ny tenanao sy ny tovolahy, ny namana sy ny namana, ao an-trano sy any am-piasana, ny sarimihetsika tsara indrindra, mozika, vokatra ary teny mahafaly
Fomba entina mampifaly - ny fomba tsara indrindra hampifaliana anao sy ny hafa
Ahoana no hampifaliana anao na ny olon-tianao? Misy fomba iraisam-pirenena ve? Raha izy no izy, dia faly avokoa ny olona rehetra, saingy aza matahotra ny hatezerana na alahelo ratsy - ilainy koa ny fitomboan'ny tena manokana sy ny fahatsapana ny fihetseham-pony. Manao ratsy, rehefa manenina ny fihetseham-po mampalahelo.
Ahoana no hampifaliana rehefa zero?
Fotoana manjombona ny olona tsirairay, ary misy fanontaniana miezaka manandratra ny tenany ho ratsy raha ratsy daholo? Voalohany indrindra, zava-dehibe ny mahatsapa fa izao dia izao, saingy fotoana fohy io, ary misy foana ny lalana, manolora tena ho an'ity fihetseham-po ity, fa aza kivy. Raha tsy afaka miatrika ny tenanao manokana ianao, dia zava-dehibe ny manontany ny namanao sy ny havanao amin'ny fanampiana ary manandrana manandrana fomba samihafa.
Ahoana no hampifaliana anao ao an-trano?
Ny raharaha an-tokantrano sy ny fandaharam-potoana andavanandro dia hidina any amin'ny fahakiviana, fa tsy tokony havela hitranga izany. Ahoana no fomba famporisihana anao haingana any an-trano, fomba:
Mandritra ny fizotran'ny fanadiovana, ampidiro mozika ary asio fihetsika, tsara foana ny mihira miaraka aminy;
manatontosa fanaraha-maso ary manipy ny fako rehetra avy ao an-trano, mizara ireo akanjo tsy ilaina na mivoaka eny an-dalambe, ka mahazo toerana ho an'ny akanjo vaovao ary fialan-tsasatra ho an'ny fiantsenana izany;
Hanamboatra ireo zavatra ao an-tokantrano;
maka beny miaraka amin'ny menaka, menaka manitra ary hazavana manodidina labozia.
Ho haingana ve ny mampifaly anao amin'ny asanao?
Ny fomba hampivelarana haingana ny tenanao amin'ny fomba fanao amin'ny andro fiasana iray mba hahatsapa ny angovo sy ny faniriana hivoatra, misy fomba maro:
amboary ny baiko;
Isaky ny adiny 2 ny manolotra 5 - 10 minitra ho an'ny hafanana mafana, dia sarotra ny mipetraka ao amin'ny toerana iray mangatsiatsiaka;
Raha ampiasaina tokana ny kabinetra, dia azonao atao ny manantona ny mozika tianao indrindra;
misotro divay, kafe miaraka amin'ny mpiara-miasa, mifampiresaka amin'ny lohahevitra mahaliana.
Ahoana no fomba hampientanentana anao haingana? Maro ny fomba ary samy manao ny zavatra tsirairay ny tsirairay, saingy misy fomba manerana izao tontolo izao ny fananganana ny toe-tsaina:
mijery irery na miaraka amin'ny sarimihetsika comedy sy fanahy;
asa amin'ny karazana zavakanto, fanatanjahantena;
mihaino ny mozika tianao indrindra;
mamaky boky mahaliana.
Ahoana no hampifaliana anao raha tsy miasa ny fomba samihafa? Azo atao tsara izany, miaraka amin'ny fanampian'ny mozika tianao indrindra. Raha efa milentika izy dia izao no fotoana hanovana ny lalao playlist. Ahoana no hananganana ny fihetseham-ponao? Mba hanaovana izany, mila mamadika ny mpilalao na ny radio ianao ary manomboka mihetsika amin'ny fotoana miaraka amin'ny mozika, ny vatany dia hilaza aminao ny fomba fihazakazahana kely, fa raha kamo loatra ianao dia afaka mahazo aina eo am-pandriana ary mipetra-potsiny ianao. Mozika izay manatsara ny fihetseham-po:
Amber Run - Ny Rivo-doza;
Mpanavotra - maso ny tiger;
Antoko Block - Mbola tadidiko foana;
Paul Van Dyk - Ho Anjely;
Angels & Airwaves - Magic Allah;
Keri Hilson - Tiako;
Alex Adair - Ataovy Mahatsapa Tsara Kokoa Aho;
Bolier & Redondo feat. Kiss Kiss - Very.
Ahoana ny hampientanentana anao raha toa ka misy fifandirana amin'ny havan-tiana, na zavatra tsy mandeha tsara amin'ny asa na amin'ny orinasa? Azonao atao ny mijery horonantsary iray momba ny lohahevitra manan-danja, izay misy ireo maherifo, mandresy ny olana rehetra, miatrika sy matanjaka kokoa, tsara kokoa sy tsara tarehy, na comédies izay tsy mila hieritreretana, fa mamela ny tenanao hihomehy. Ny sarimihetsika tsara indrindra amin'ny fanabeazana ny toe-tsaina:
" Ny Taona Tsara ." Max dia mpamatsy vola mahomby, sarotra sy miaina ary miaina any Londres, dia miorina amin'ny asany. Vetivety dia tonga ny vaovao momba ny fahafatesan'ny dadatoany, izay nipetraka tany Provence ary nitondra an'i Max fa tsy ny rainy. Nandova ny fivarotany ny dadatoan'i dadatoany i Max ary mba hamahana ny raharaha ara-pianakaviany dia mandeha any Provence izy, izay miovaova ny fiainany mandritra ny herinandro.
" Ny Lakandranon'i Lake ". Ny horonantsary izay tsy manan-tsahala Keanu Reeves sy Sandra Bullock dia hientanentana, satria mampiseho fitiavana amin'ny fandresena ny fetran'ny fotoana sy ny habaka.
Ny Adventures of Paddington . Ny aventan'ny jono tsy mahazatra, avy any amin'ny ala any Londres, dia hahatonga ny olona mitsikitsiky indrindra aza, ny sarimihetsika dia asaina hijerena ny fijerin'ny fianakaviana.
"Ny fiainana dia tsy mety manozongozona / Zindagi Na Milegi Dobara ". Indraindray mampihetsi-po lalao indiana momba ny namana telo mifandimby, miaraka amin'ny dihy sy ny toerana mahafinaritra.
"Ny Nibahana ny Fahamarinana ." Izy dia mpanolotra fandaharana amin'ny haino aman-jery mafonja, ary manan-java-manahirana roa izy: mihena ny fanombanana ny fandaharana ary tsy misy vintana amin'ny lehilahy. Ary avy eo dia niseho Izy, ilay mpanome hevitra, izay voatendry hanandratra azy. Izy dia tsy manan-tsiny, manevateva ary tsy manambony , fa manangona mpijery ny mpilalao azy, ary koa izy no mpitaitaona amin'ny fifandraisana eo amin'ny lahy sy ny vavy.
Teny mampiakatra ny fihetseham-po
Mood - toy ny toetr'andro izany, miova matetika, indrindra amin'ny vehivavy. Ao amin'ny tontolo maoderina, ny fifandraisana tena misy dia nosoloina virtoaly iray, ary misy ihany koa ny tsy fahombiazany, satria amin'ny toe-javatra mampihetsi-po sy alahelo dia sarotra ny mampita ny fihetsehampo amin'ny gadget. Eny, azo atao ny mandefa fandefasana mampihomehy, saingy tsy najanona ny hafanan'ny fananana olona iray, ary inona no tokony hatao, ahoana no hampitomboana ny fihetseham-pon'ny olona amin'ny alalan'ny taratasy?
Azonao atao ny mandefa azy tononkalo izay mampiakatra fihetseham-po na famporisihana ny fehezanteny, tsara kokoa raha ao amin'ny teniny manokana sy amin'ny fo manontolo izy ireo, fa afaka mampiasa fehezin'ny mpandinika na avy amin'ny boky tianao sy sarimihetsika ianao:
Ilaina ny rahona mba hahafaly ny masoandro!
Ny fiainana mahafinaritra dia manomboka amin'ny eritreritra tsara sy mahafaly!
Ny ranom-behivavy dia tsy mitomany, fa ny tsikiny!
Ny fialan-tsasatra ratsy, midika izany hoe miantso ny tsikiny amin'ny endrika masoandro avy any ambadiky ny rahona.
Tokony ho marary tsara ny fahatsapana tsara mba hahafahanao manafika ny hafa manodidina azy.
Boky manandratra ny fo
Ahoana no ahafahanao mampifaly raha tsy misy hery hanaovana zavatra ary manomboka sy mamoy ny tananao. Ny famakiana boky tsara dia nisy fiantraikany teo amin'ny vatana foana. Angamba izao no fotoana hialana sasatra sy halefa amin'ny famakiana boky mora sy mahafinaritra, izay ahitana ireo tarehin-tsoratra maintimetatra tafiditra ao anatin'ny tantara an-tsary na sarotra ary mivoaka avy amin'izy ireo amin'ny fahamendrehana, lasa matanjaka sy tsara tarehy kokoa? Boky ho an'ny fananganana ny toe-tsaina:
" Diary an'ny Bridget Jones " H. Fielding. Ny mahagaga ao amin'ilay boky, Bridget, ankizivavy faly dia manoratra ny alahelony, ny traikefa, ary matoky azy amin'ny maha-namana azy ao amin'ny diariny. Bridget dia tafiditra amin'ny karazana fifametrehana hafa, izay ho very ny fahadisoan'ny sasany ary ho lavo amin'ny fahadisoam-panantenana, fa i Bridget kosa dia manohy ny fahasambarany.
" Divay avy amin'ny doloma " R. Bradbury. Anisan'ny mpamaky an'io bestseller io no heverina ho tsara sy malaza indrindra. Sangisangy sy loko malefaky ny fahavaratra, feno hafanana hafakely sy zava-nitranga autobiografika no mahatonga anao mitsiky sy mampifaly olona.
" Telo anaty sambo, tsy manisa alika " nataon'i Jerome K. Jerome. Olona telo sy alika miaraka amin'izy ireo no mandeha sambo ao amin'ny Thames, na dia tsy manana fahaizana hiatrehana sambo aza izy ireo. Ny fahavalo dia latsaka ao anatin'ny toe-javatra mampihomehy.
" Dona Flor sy ny vadiny roa " J. Amadou. Ny karnavaly breziliana, fifosana, fifanakalozan-dresaka ary eo afovoany dia olo-mofomamy malaza izy, izay tsy nahatonga azy ho sambatra ho an'ny vehivavy ny fanambadiany, fa raha samy mandray kely kely izy ireo ...
"Ilay anjely tao amin'ny rivotra " nataon'i L. McCrossan. Ny lamaody sy ny lolo manintona momba ny fitiavana ny fiainana, fa tsy ny zavatra manomboka mandeha tsy lavorary mitarika loza, fa ny mifanohitra amin'izany, miezaka ny miditra zava-mahagaga iray, izay mitranga amin'ny toetra amam-panahy, ilay mpanolotra fandaharana amin'ny radio.
Ireo vokatra izay mampifaly
Ny fahafinaretana sarobidy indrindra ho an'ny olona dia ny sakafo. Fantatry ny mpitondratenin'ny vehivavy fa misakafo ao anatin'ny minitra vitsivitsy ny sôkôla, noho ny fisian'ny voankazo kakaô ao amin'ny tryptophan, izay misy fiantraikany amin'ny famokarana hormones fifaliana. Eny, inona no holazaina, ohatra, rehefa misy orana ny toetrandro ivelan'ny varavarankely, miteraka alahelo, sa tsy misy olona hiresahana? Ilaina ny mampiasa ny solosaina: fofona, manohina ary manandrama.
Inona avy ireo vokatra mety hampifaly anao amin'ny:
Ny akondro - ireo antidepressantsana voankazo malaza indrindra, manan-karena serotonina, potassium, vitamin B6 ary hormone alkaloid - ireo singa rehetra ireo dia miteraka hafaliana sy hafaliana;
cheese - dia ahitana ny amine asidraamine, ny phenylethylamine, ny tsy fahampian-dry zareo dia miteraka ranonorana;
Ny voan-java-trondro - zava-mahasoa mitondra ny B6, omega-3, tryptophan ary selenium;
Ny trondro misy varimbazaha mena dia heverina ho iray amin'ireo antidepresse izay matanjaka indrindra, toy ny nanan-karena tamin'ny homamiad omega-3;
atody iray - ao anaty atody tokana iray manontolo fanatobiana fitaovana ilaina ho an'ny asa mifantoka tsara amin'ny zavamanana manontolo ary vokatr'izany - omena fahatsarana tsara.
Ahoana no hampifaliana lehilahy?
Ahoana no hampifaliana olona iray na namana iray? Ny antsasany mahery amin'ny maha-olombelona dia mandefitra ny zava-drehetra amin'ny fahanginana, ary ny lehilahy dia tsy afaka maneho fihetseham-po ratsy, satria "tsy mitomany ireo lehilahy!", Kanefa mijaly sy mijaly ihany koa izy ireo. Fomba hanamafisana lehilahy iray:
mba hampahazava azy ireo fa vonona hihaino azy izy ireo;
Tsarovy zavatra mahafinaritra amin'ny fandevenana iombonana;
Fifandraisana manelingelina (hug, pat);
manasa handeha any;
Manaova fahagagana (vaovao tsara tarehy vaovao, sakafo hariva amin'ny labozia).
Ahoana no hanamafisana sipa?
Ny vehivavy dia tsotra kokoa, izy ireo dia noho ny natiorany tena feno fihetseham-po sy fampaherezana izay manandratra ny fahatsapana ho an'ny ankizivavy iray milaza tamim-pahatsorana sy amin'ny finoana fa ny rehetra ho tsara kokoa, dia ny fitsaboana tsara indrindra, indraindray ianao dia tokony ho akanjo fitafy ny hatsembohan'ilay tovovavy. Ahoana no hampifaliana anao - eto dia azonao atao ny mampiseho ny eritreritrao. Ohatra, afaka mandamina antoko pelaka ianao amin'ny fijerena sarimihetsika amin'ny lohahevitra am-pitiavana na amin'ny fomba tsara hanasana ireo vato ho an'ny fahavalo.
Ahoana no hampifaliana namana?
Ny fomba fananganana ny fihetseham-pon'ny olona iray dia nampiseho fomba maro, saingy mila miantehitra foana amin'ny elatrao ianao, satria tsy voatery miezaka manatsara ny toetranao ianao, na izany aza, ny alahelo maivana toy ny fihetseham-po ihany koa dia ilaina. Ahoana no fomba hananganana ny toe-tsaina miharihary sy tsy mitandrina? Mangataha namana izay zavatra tiany hotanterahina, raha tsara fanahy izy ireo, avelao izy ireo hibanjina sy hijery ny valiny, inona no azo atao.
Axiology - fotopampianarana momba ny soatoavina
Wedding bouquets amin'ny tanimanga polymère
Tena tsara tarehy ny mamolavola papay napkins?
Fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena miaraka amin'ny kapa
Ny akanjo volon'olon-doha amin'ny kapa
Kiraro matevina ambany 2013
Fiara ho an'ny vehivavy
Feso avy amin'ny rivotra
Sofa katsaka amin'ny toerana mitokana
Faly ihany nony farany: Nomen'i Liam Hemsworth an'i Miley Cyrus ilay peratra voalohany tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany